WAA MAXAY CADDADKA LACAG LA'AANTA AH EE LOO YAQAAN 'WHITEWEAR', SIFOOYINKA DAAWOOYINKA IYO MAADOOYINKA LOO ISTICMAALO - DAAWADA DADWEYNAHA
Potentilla cad: guryaha, faa'iidooyinka iyo isticmaalka
Potentilla cad waa dhir aan caadi ahayn. Waxaa laga helaa oo keliya duurka. Warshad waxaa iska leh Rosy Family, genus Potentilla. Dadka waxaa loogu yeeraa pyatipalnik, pyatipal, derbiga pyatipe. Geedka dhoobada ah ee Potentilla wuxuu ku koraa dhererka 8 illaa 25 cm, xididkuna waa mid adag, midabka madow-madow. Dhirta oo dhan waa la daboolay timaha, caleemaha cinquefoil yihiin palmate iyo silky hoos, shan of caleemo cagaaran madow. Peduncles waxay leeyihiin 1-2 caleemo iyo keenaan 3-5 ubax kasta. Ubaxyada waxay leeyihiin tufaax cad. Sababtoo ah midabka ubaxa, warshadda waxay heshay magaceeda - silverweed cad. Ubaxku wuxuu sii socdaa xilliga guga - bisha koowaad ee xagaaga.
Warshadani waxay leedahay tiro ka mid ah guryaha gaarka ah. Waxay u bogsan kartaa oo ay wanaajin kartaa xaaladaha tiro cuduro ah. Sidee iyo sababta ay tani u dhacdo waxaa la ogaan doonaa ka dib markaad baraneysid halabuurka geedka iyo saameynta jidhkaaga.
Waxyaabaha kiimikada ah ee Potentilla cad
Waxyaabaha kiimikada ee kiimikada cagaarka ah waxaa ka mid ah dhamaanba qaybaha miisaska wakhtiyada. iyo walxo kale oo faa'iido leh:
Tilmaamaha raadraaca - Zn, Mn, Si, Cu, Ce, Al, Fe, Co;
gallotanin - inta lagu guda jiro xilliga ubax, content ugu sareeya ayaa la arkay;
asaliga carbonylic phenol;
flavonoids sida rutin, cyanidin, kaempferol, quercetin;
Qaybta dhulka hoostiisa ee geedka waxaa ku jira walxo badan oo bayoloji ah oo firfircoon marka loo eego qaybta above.
Cudurrada noocan ahi waxay noqon karaan kuwo waxtar leh
Potentilla cad waxay leedahay calaamado kala duwan oo loo isticmaalo. Waa wax ku ool ah cudurada sida:
cudurrada nidaamka wadnaha;
cudurrada mareenka mindhicirka;
Warshadu waxay leedahay saamayn yar oo yareyneysa cadaadiska dhiigga. Sidoo kale cinquefoil white ayaa loo isticmaalay sidii antiseptic, astringent, bogsashada nabarka, wakiilka antitumor. Dhirta Tani waxay gacan ka geysataa qaabaynta qaabka nodular, burooyinka jilicsan, saameyn togan ku leh qaabka timaha iyo ciddiyaha.
Waa muhiim! Gobollada ay korodheen cudurrada qanjirka thyroid ee ka dhexjirta dadka, meelaha ay ku yar tahay iodineka dabiiciga ah, isticmaalka cinquefoil cad ayaa muhiim ah.
Sidoo kale pyatipal waa daawada loo yaqaan "diuretic", taas oo aan xanuujin kelyaha. Waxaa loo isticmaalaa suuxdin. Warshadu waxay hoos u dhigtaa xargaha xididdada, xakamaynta maraakiibta dhiigga. Waxay leedahay waxyaala xayeysiin ah waxaana loo isticmaalaa hargabka.
Daroogada oo ku saleysan Darajada Potentilla
Samee daawooyin kala duwan oo ka yimaada Potentilla cad. Kuwaas oo ka mid ah qaybaha anteenada geedka, waxay kiciyaan habka dhexe ee dareenka. Dhammaan noocyada kala-soocidda iyo ka-soo-baxyada asalka ah waxay ku habboon yihiin in la dheellitiro dheellitirka hormoonka ee jirka. Caadi ahaanshaha shaqada tayroodhka, kordhinta diureed, ka hortagga iyo daaweynta cudurrada beerka, mareenka caloosha, laabotimism iyo kuwo kale.
Waa muhiim! Isticmaalka daroogo kasta oo ay ku jirto quwad cad oo la socota iyada oo la socota hagaajinta xaalad ciddiyaha iyo timaha. Timaha ayaa iftiiminaya, dariiqyadu ma kala qaybsanaan, iyo ciddiyo aan mar dambe dhuuqin.
Iyada oo ay ku xiran tahay hantideeda, cinquefoil waa qayb ka mid ah diyaargarawyada ka caawinaya inay la qabsadaan cudurrada kala duwan.
Potentilla cad waxay wax ku ool u tahay tufidda waxayna ka kooban tahay qayb ka mid ah diyaargarowga "Alba", "Endonorm". Daroogooyinkaasi waxay wax ku ool u yihiin cudurada thyroid - hyperterioses, hypothyroid, thyroiditis autoimmune. Waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu daaweeyo hyperplasia ee qanjidhada tayroodhka, waxay kala jajabisaa kuwa aan suntan lahayn, kuwa qulqulaya iyo kuwa isku dhafan.
Daawada Potentilla cad waa daroogo ku jira foomka dareeraha kaas oo wax ku ool u leh boogaha caloosha, si hoos loogu dhigo cadaadiska dhiig-karka, xawaarida habka bogsashada ka dib istaroogga iyo weerarka wadnaha, kordhinta awoodda, ka takhalusidda radionuclides. Waxa kale oo ay hagaajinaysaa difaaca, waxay hagaajisaa noocyada kala duwan ee metabolism, waxay hagaajisaa heerarka hoormoonka. Qaadashada kaabashka waxay hagaajineysaa fayoobaanta.
Isticmaalka cadarka cinquefoil ee daawada dhaqameed
Daawada dadweynaha, potentilla cad ayaa caan ku ahaa waqti dheer. First of dhan, waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada nidaamka endocrine - xaaladaha hypo-iyo hyperthyroid. Waxaa loo isticmaalaa in lagu magdhabo yaraanta iodine, iyada oo boogaha maqaarka, boogaha, cambaarta, cagaarshowga, cagaarshowga, cudurada wadnaha iyo wadnaha.
Isticmaalka cadada cinquefoil ee daawada dadku waxay ku dhacdaa qaab decoctions, tinctures, boomaatada, iyo sidoo kale qaado waaskada.
Diyaarinta tincture ee Potentilla cad
Waxaa jira dhowr cuntooyin oo la kariyo. Potentilla tincture cad.
Potentilla tincture cad. Si aad isugu diyaariso qaadashada 1.5 qaado oo ah isku dar ah oo ah xididdada dhulka qallalan iyo caleemaha geedka. Ku xir 200 ml biyo karkaraya kuna adkeyso darmuuska ilaa 8 saacadood. Cadaadiska faleebo. Qaado nus saac ka hor cuntooyinka qiyaas ahaan 1-3 qaado oo 2-3 jeer maalintii maalintii daaweynta qanjirka thyroid.
Tincture ee xididdada of Potentilla cad on vodka. Wixii ka mid ah, qaado 50 g oo xididdada la qalajiyey, hore loo burburiyey. Weelka dhalada, waxay ku shubeen vodka xaddiga 500 ml, si adag u xidh xidhan leh. Muddo afar toddobaad ah, isku daadi isku dar ah meel gudcur ah, marmarna gariir. Taas ka dib, cadaadis iyo waa la qaadi karaa. Soo-dhaweynta waxaa soo saarey by kala diridda tincture ee biyo of 20-30 dhibcood.
Tincture ee geedka Potentilla cad. Qaado 2 qaado oo cows ah oo qalalan oo isku dar 200 ml oo biyo ah karkaraya. 8 saacadood waxay ku adkeyneysaa darmuuska iyo cadaadiska, ka dib markaad tincture u qaadan karto si caadi ah dhiig karka.
Ma taqaanaa? Tincture Pyatnipalnik lagu taliyey in la diyaariyo isticmaalka biyo dhalaalid.
Maraq karkaar laga bilaabo Potentilla cad
Wixii diyaarinta maraq laga bilaabo Potentilla, waxaad u baahan doontaa xidid geedka shredded - 1 tsp iyo 200 ml oo biyo ah. Karkari isku dar ah 5 daqiiqo kuleylka hooseeya una diyaari 40 daqiiqo. Ka dib markaa, maraq ayaa la sifeeyaa, marka, la qaboojiyo, waxaa la qaadaa 1-1.5 saacadood ka hor cuntada.
Sidoo kale samee decoction ka miraha geedka. Waxay qaataan 1 qaaddo shaah, ku shub hal galaas biyo oo isku kari ilaa 5 daqiiqo. Ka dib markaa, maraqku waa la qaboojiyey, geddigoodana waa inuu qaataa nus koob maalinkiiba laba jeer cudurada dumarka.
Diyaarinta cadarka cad Lapchatka cad
Si aad u diyaariso cadarka cad ee cinquefoil cad, waxaa looga baahan yahay in ay qaataan 5 g of xididka dhirta la jajabiyey iyo ku shub 200 g oo ah baruurta doofaarka dhalaalay ama saliid on. Karkari isku dar ah ilaa 7 daqiiqo, hayso karkar yar, ka dibna adkee.
Bariisku wuxuu ka caawiyaa barar-xirka xubnaha, osteochondrosis, radiculitis. Waxaa lagu soo rogaa dhibco yaryar oo ah qaabka cadaadiska ama si fudud loo ruxay.
Nadaafada dhirta dabka
Si loo yareeyo xiisaha dareemayaasha ah, farsamooyinka maydka lagu maydho cawska Potentilla. Xayawaannada noocan oo kale ah ayaa ka caawin doona inay la qabsadaan shaqada badan, waxay ku daraan decoction ah isku dar ah oo geedo ah: silverweed cad, roodhida, malabka liinta, nettle, yarrow, daarta. Qaadashada kicinta noocan ahi waxay ka caawisaa in laga gudbo hurdo la'aan, daal daba dheeraato, walwal iyo hoos u dhigo guud ahaan jirka.
Waxa kale oo aad qubeysan kartaa qubayska iyada oo lagu daro decoction oo kaliya shan farshaxan.
Isu ururinta iyo kaydinta Potentilla
In daawada dad, dhammaan qaybaha geedka waxaa loo isticmaalaa - boogta cad oo cad cad, abuur, ubax, caleemo. Wixii soo goosashada, dhirta saddex ama afar sano jir ayaa loo isticmaalaa, marka ay soo uruuriyaan albinin ku filan, walax leh waxqabadka tayroodh.
The miraha warshad bislaadaan bisha June-July, ka dib markii ay si fudud u dhaco. Waxaad u baahan tahay inaad haysatid wakhti aad ku soo ururiso ka hor intaadan daadin oo sanduuqa ku ridin meel qallalan.
Qaybta cawska ah ee la wadaag leh ubax ayaa laga goostay dhammaadka guga ilaa dhammaadka xagaaga. Qalajinta, ku rid hawada furan ee hoostiisa hoostiisa leh dhumucdeed miisaanka 3-5 cm. Habka qalajinta, alaabta ceeriin waa in si tartiib ah isku qasan. Ku kaydi sanduuqyada laba sano.
Xuduudaha potentilla waxaa lagu goostay goosashada kaliya guga ama dayrta, bisha Abriil ama bilaha Sebtembar - Oktoobar. Tani waxay dhacdaa marka caleemaha yaryar ee geedka ay bilaabaan inay koraan ama marka qaybta kor ku taal ay dhinto. Mashiinka qashin qubeyska ama digger. Xididdada waxaa laga doortaa dhulka, gooyaa qaybta caanaha iyo qaybaha jilicsan ee rhizomes leh xididada yaryar.
Ka dib markaa, rhizomes waxaa lagu dhaqaa biyo qabow, sidaas awgeed iyaga ka soo cayayaanka, waxay la qalajiyey dhawr maalmood hawada furan. Marka xigta, alaabta ceeriin ah ayaa la dhigayaa hoosteeda hoosteeda, meelaha qoyaanka lehna hawo wanaagsan oo qalajinaya. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qalajiyaha iyo foornada, taas oo heerkulku aanu ka badnayn 50-60 digrii.
Ma taqaanaa? Si loo qalajiyo rhizomes leh tayo sarre leh, waxay si fiican u dhigeen on maqaar ama bacda dubista.
Ka dib qalajinta, 70% mugga geedka ayaa laga saaraa. Waxaad ku keydsan kartaa qalabka shaqada ee qolka qallalan ee fiican ee 5-6 sano.
Yey tahay inaanan qaadin Potentilla
Potentilla White waxay ogaatay guryaha faa'iidooyinka leh, laakiin sidoo kale waxay ka hortagaan. In kasta oo xaqiiqda ah in maaddooyinka dhirta ka samaysanayaan ay yihiin kuwo aan sun ahayn, oo aan macquul aheyn wax saameyn ah oo jirka ah, mararka qaarkood waa lagama maarmaan in la ilaaliyo taxaddar aad u daran.
Pyatipaln wuxuu kaa caawinayaa yareynta cadaadiska, markaa hypotension waa contraindication si aad u isticmaasho daroogooyinka leh dhirta kuwan ka kooban. Waxaa sidoo kale si gaar ah taxaddar u ah in la helo marka ay dhacdo hypothyroidism.
Si kastaba ha noqotee, isticmaalka Potentilla cad, sida daroogooyinka kale, waxaa wanaagsan inaad la xiriirto dhakhtarkaaga.